Ciidamada Amaanka Syriaoo isku balaariyay Magaalooyinka dalkaasi. – SBC
Ciidamada Amaanka Syriaoo isku balaariyay Magaalooyinka dalkaasi.
Ciidamada Amaanka Syria ayaa isku balaariyay dhowr magaalo oo ay ka socdaan banaabaxyada looga soo horjeedo madaxweynaha Syria Bashaar Al asad.
Magaalooyinka Deraa, Hims iyo Baniyas ayaa Dowlada Syria ay sheegtay in ay yihiin magaalooyin ay isku aruur sanayaan sida ay hadalka u dhigtay kooxo argagixisa ah,waxaana ay kordhisay tirada ciidamadeeda ee deegaanadaas.
Magaalada Hims oo ah Magaalada Sadexaad ee ugu weyn Syria ayaa waxaa ilo wareedyo ku sugan deegaankaasi ay sheegayaan in ay ka jirto sirasaaseyn,iyadoona xaalad degdeg ay dowladu kusoo rogtay magaaladaas.
Kooxo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ku sugan dalka Syria ayaa sheegay in ay sii kordhayso tirada dadka u dhinamaya rasaasta ay ridayaan Ciidamada Amaanka ee Dowlada Syria.
Banaabaxayaasha diidan Nidaamka Dowlada Bashaar Al asad ayaa ku adkaysanaya in ay sii wadi doonaan madaharaadyada tan iyo inta uu madaxweynaha dalkaasi is casilay.
Beesha caalamka ayaa iyaduna kordhisay cambaareynta ay u jeedinayso Dowlada Syria,waxaana jira goodin dowlada loogu goodinayo in cunaqabatayn la saarayo hadii aanay joojin tacadiyada ay ku hayso shacabka banaabaxaya.